Iindaba -Iinyani malunga nePlastiki enokutsha
1. Yintoni iplastiki enokuthotywa?
Iplastiki enokuthotywa ngumqondo omkhulu. Lixesha lexesha kwaye iqulethe inyathelo elinye okanye nangaphezulu phantsi kweemeko ezichaziweyo zokusingqongileyo, kukhokelela kutshintsho olukhulu kulwakhiwo lwekhemikhali, ukulahleka kweepropathi ezithile (ezinje ngengqibelelo, ubunzima bemolekyuli, ulwakhiwo okanye amandla oomatshini) kunye / okanye ukwaphuka iplastiki.
2. Yintoni iplastiki enokuboliswa ziintsholongwane?
Iiplastikhi ezinokuboliswa ziintsholongwane ziiplastikhi ezinokuboliswa sisenzo sezinto eziphilayo, zihlala ziyi-microbes, emanzini, icarbon dioxide, kunye ne-biomass. Iiplastiki ezinokuboliswa ziintsholongwane zihlala ziveliswa ngezinto ezinokuhlaziywa ezinokuhlaziywa, izinto ezincinci, iipetrochemicals, okanye ukudityaniswa kwazo zontathu.
3. Yintoni izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane?
Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane zibandakanya izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ezifana neselulosi, istatshi, iphepha, njl. Njl. Kunye neeplastikhi ezinokuboliswa ziintsholongwane ezifumaneka kwi-bio-synthesis okanye synthesis synthesis.
Iplastikhi enokuboliswa ziintsholongwane ibhekisa kwityiwa engaphiliyo eneminerali kunye ne-biomass entsha (enje ngemizimba efileyo, njl.njl. iimeko zokugalela umgquba okanye ukugaya ukutya okune-anaerobic okanye ulwelo olunenkcubeko olunamanzi, oluya kuthi ekugqibeleni lonakaliswe ngokupheleleyo lube yi-carbon dioxide (CO2) okanye / kunye ne-methane (CH4), amanzi (H2O) kunye nezinto eziqulethwe apho.
Kufuneka iqatshelwe ukuba lonke uhlobo lwezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, kubandakanya iphepha, zifuna iimeko ezithile zokusingqongileyo ukonakaliswa kwazo. Ukuba ayinazo iimeko zokuthotywa, ngakumbi iimeko zokuphila zeentsholongwane, ukuthotywa kwayo kuya kuhamba kancinci; kwangaxeshanye, ayizizo zonke izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane ezinokuhla ngokukhawuleza phantsi kwayo nayiphi na imeko yendalo esingqongileyo. Ke ngoko kuyacetyiswa ukuba sigqibe ukuba ngaba izinto zinokuboliswa ziintsholongwane ngokufunda imeko yendalo esingqongileyo kunye nokuhlalutya ubume bezinto ngokwazo.
4. Iindidi ezahlukeneyo zeplastiki ezinokuboliswa ziintsholongwane
Ngokoluphi uhlobo lwempahla eluhlaza esetyenziswayo, iplastiki enokuboliswa ziintsholongwane inokwahlulwahlulwahlulwahlulwa ngokwamacandelo amane. Udidi lokuqala yiplastiki eqhutywa ngokuthe ngqo kwizinto zendalo. Kwintengiso okwangoku, iplastiki enokuboliswa yintsholongwane, eveliswa ziipholima zendalo ikakhulu zibandakanya isitatshi se-thermoplastic, biocellulose kunye ne-polysaccharides njl. Udidi lwesibini yipolymer efunyenwe kukucocwa kwe-microbial kunye ne-synthesis synthesis, njenge-polylactic acid (PLA), njl .; Udidi lwesithathu yipolymer, edityaniswe ngokuthe ngqo zizinto ze-microorganism, ezinjenge-polyhydroxyalkanoate (PHA), njl .; Udidi lwesine yiplastiki enokuboliswa ziintsholongwane efumaneka ngokudibanisa izinto esele zikhankanyiwe okanye ngokongeza ezinye izinto ezenziwe ngemichiza.